Isijobelelo esihle esinombono we-panorama obheke ulwandle - I-Airbnb
Isijobelelo esihle esinombono we-panorama obheke ulwandle
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Anne Marit
U-Anne Marit Ungumbungazi ovelele
Isijobelelo esihle, esivulekile egqumeni lase-Melsomvik esinombono we-panorama omangalisayo obheke ulwandle. Eduze nolwandle futhi izithuthi zomphakathi ezixhumeke kahle eziya edolobheni laseTønsberg nezitolo zasendaweni zaseStokke. I-jacuzzi engaphandle ebuka izivakashi.
Isijobelelo esincane esiseduze nendlu enkulu, nokho siyimfihlo. Isijobelelo sinohlelo oluvulekile olunemibhede emi-2 ethokomele kanye nombhede wesithathu otholakala uma ucelwa. Isijobelelo sinekhishi elincane elinazo zonke izinto eziyisisekelo; i-microwave, hobs, ifriji, iketela, umenzi wekhofi. Kukhona negumbi lokugezela elihlukene elihlanganisa ishawa nosinki. Isijobelelo sixhunywe kuthala elikhulu, elinelanga lapho ungakwazi ukushisela ilanga futhi ujabulele ukudla kwakho. Kukhona ne-bbq encane etholakalayo yezivakashi futhi i-jacuzzi yomndeni ingasetshenziswa izivakashi zethu! Sicela ulethe izingubo zakho zokubhukuda:-)
4.98 · 255 okushiwo abanye
I-Melsomvik iyidolobhana eliseduze nolwandle cishe. 2000 izakhamuzi. Kukhona i-marina nendawo yolwandle enombhoshongo wokuntywila, izindawo zokusebenza kanye nendlela ethandekayo ngasogwini lolwandle.
Indawo yokuqala yokuhlala eMelsomvik inhle kakhulu ngezindlu zayo ezincane zamapulangwe ezimhlophe kanye nemigwaqo emincane. Isitolo sokudla sendawo siqhele ngamakhilomitha angu-1,5 ukusuka endlini.
Izindawo zokuhlala ezengeziwe e-Melsomvik:
- Isiteshi sesitimela saseStokke 3 km
I-Sandefjord 13 km
- Isikhumulo sezindiza i-Torp 15 km
- I-North Cape 2000 km
Ibungazwe ngu-Anne Marit
UAnne Marit Ungumbungazi ovelele